Ukuvikelwa nokuthuthukiswa inzuzo nge alarm Starline a61 Ingxoxo
Ezweni lanamuhla akuyona emi namanje. Konke kuba izimpilo ashukumisayo ngaphezulu. Ukushesha zokuphila kuleli shumi leminyaka elidlule baye banda okungenani kabili. Abantu egijimela ukusebenza, umsebenzi, ukuhamba ebhizinisini. Isigqi emzini omkhulu kwenza imithetho yayo siqu futhi ubeka nenhlalakahle uzimele. Ngokuvamile, le mikhawulo ungavumeli umuntu ukuba akwazi ukuqedela zonke ibhizinisi okuhleliwe. Esimweni esinjalo, omkhulu kuyasiza kokuba imoto. Usuku ngalunye oludlulayo iba abashayeli abaningi.
Namuhla, cishe wonke umuntu bayokwazisa lula kanye nesidingo ezokuthutha siqu. Kodwa nge ukuthenga imoto, kunezinkinga eziningi ukuba ixazululwe. Omunye wemigomo eyinhloko umnikazi imoto - ukuvikela unit wakho. Bese kukhona umbuzo kukhethwa izinga imoto alamu. Omunye wabaholi embonini alamu kuyinto Starline brand. Le nkampani "UltraStar" ekubhekaneni udaba zomculo ezifana, yasungulwa ngo 1988. Ekuqaleni inkampani distributor Swiss imoto alamu. Kodwa kakade ngo-1994, ukukhiqizwa imikhiqizo siqu, phakathi okwakukhona Starline brand wethulwa.
Omunye ethandwa kakhulu inkampani avtosigalizatsy namuhla imodeli A61 Starline I Ingxoxo. Lena uhlelo yezokuphepha esine umsebenzi ukulawula ingxoxo. Kulula kakhulu ukusebenzisa, kanye nezici zayo lobuchwepheshe - ubeqhakambisa intuthuko yesimanje nenduduzo ukusetshenziswa.
Car alamu Starline A61 I Ingxoxo ingafakwa izimoto nanoma uhlobo injini, kungakhathaliseki ukuthi u-diesel, uphethiloli noma Turbo. Lolu hlelo nokuvikeleka elula njengokuthi ukufaka nokusebenzisa. Inzuzo yayo eyinhloko isiqinisekiso nokwethenjelwa nokutholakala ikhodi lengxoxo control.
Ukuvikela ikhodi isebenzisa algorithm Ilokhi ngokuphelele ngabanye ukubethela okhiye. Lokhu kungabi sengxenyeni ngokuphelele nokugenca ubuhlakani ikhodi cishe akunakwenzeka pick up. ukusebenza Solid kulo msakazo inikeza "Megapolis" Imodi. Lesi sici kwandisa engaba ukulawula kanye alamu Starline A61 ingxoxo, inikeza idatha ngesimo imoto at ibanga ezingaphezu kuka-1 km.
Imenyu ngesiRashiya kakhulu lula ukwethulwa Starline A61 Ingxoxo. Ukusetshenziswa kwalesi imodeli isibonakaliso umshini inikeza isivikelo onokwethenjelwa "yensimbi ihhashi". Ngaphambi kokufaka Starline A61 ingxoxo, impendulo abathengi ukusiza ukwenza isinqumo esiwujuqu. Ukugxila amanothi ekhona ikhasimende, kungashiwo ngokuthi uhlelo yezokuphepha - omunye eliphezulu kakhulu futhi waba nokwethenjelwa ekilasini yayo.
Ngokuvamile, abashayeli bathi izinzuzo "Megapolis" uhlelo, kanye nokuntuleka positives bamanga. UHlelo esheyininikhiye rubberized izici ikubonisa LCD futhi ifakwe icala lesikhumba. Okufakiwe futhi unezela charm ngaphandle LCD isibonisi. Abanikazi of Starline A61 Ingxoxo akuvamile ukugubha ukwehluleka futhi ukungasebenzi ohlelweni. abashayeli Ngeneliseke ngokuphelele futhi ububanzi imoto. Uma umthengi ufuna inhlanganisela uyakufanelekela intengo nekhwalithi, ungakwazi ngokuphepha ukhetha ukuba kube Starline A61 Ingxoxo.
Microbuses "Ford": Ukubukeza ezinye onobuhle
Daihatsu "Sirion" - izinga Japanese yinoma ubani
Imoto yohlobo lwe-Mercedes Coupe C-Class: Ukucaciswa
Kuyini isakhiwo amabhande generator, futhi ziyini na?
Kungani ndikindiki umlenze futhi kanjani ukulwa naso?
Simila yomzimba esibelethweni ophuzi: ukwelashwa, izimpawu, ubungozi
Indlela ulondoloze imali ephathini yomshado izivakashi abazange bakuqaphele yini?
Ancient Russia: isiko kanye nezici zayo
Prince Mihail Abakwazi Abakwenzayo: iDemo biography, umlando kanye izikhumbuzo
Iyini i-alveolus. I-alveoli yama-Lung
I-Perfume i-Dsquared "Izinkuni" - amakha amancane aseCanada
Indlela ukupheka amabele phezu kwamanzi? Ungadliwa, izithombe, izincomo